နှစ်သစ် လက်ဆောင် ရခဲ့တဲ့ အမိုက်စား စန္ဒယားကြီး နဲ့ ဂီတ လက်စွမ်း ပြနေတဲ့ ဖြူဖြူ့ရဲ့ အပျော် တွေကို အမိအရ မှတ်တမ်း တင်နေတဲ့ ကျော်ထက်အောင် – Cele Oscar
ချစ်ခင် ရတဲ့ ဖွားရှင် (ချမ်းမြေ့ဂုဏ် ဝေ သီလရှင် စာသင်တိုက်) က ဆရာလေး လက်ဆောင်ပေး တဲ့ စန္ဒယားလေး ကို တမြတ်တနိုး တီးခတ်ပြီး ပျော်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူ့ရဲ့ ကျေနပ်ပီတိ တွေကို ကျော်ထက်အောင် က အမိအရဓာတ်ဖမ်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ လက်ဆောင် ဆိုတာ ချစ်သူခင်သူ တွေ အချင်းချင်း မေတ္တာအတိမ်အနက် ကိုဖော်ပြတဲ့ သင်္ကေတပါပဲ.
ဒီလက်ဆောင် လေးဟာ ဖြူဖြူ့အတွက် တော့အရမ်း ကိုအသုံးဝင်ပြီး မေတာ နဲ့ပေးတာ မို့ တန်ဖိုးမ ဖြတ်နိုင်လောက် စရာပါပဲ။ သီချင်းကောင်း တွေကိုအမြဲတမ်း ဖန်တီးတတ်တဲ့ ဖြူဖြူ့ အတွက်တော့ အထောက်အကူ ကောင်း တစ်ခုဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ မြတ်နိုးတဲ့ဂီတ တွေကို နောက်ထပ် ဆန်းသစ်ပြီး ဖန်တီးနိုင်တော့မလို ဖြူဖြူ ကပျော်မဆုံးပါပဲ။
စန္ဒယား လက်သံ စမ်းနေတဲ့ပုံလေး တွေကို ” နှစ်သစ်လက်ဆောင်လေး ကြွားပါ ရစေနော်။ ဖြူဖြူသီချင်းလေး တွေတီးဆိုဖန်တီး ဖို့ဆိုပြီး Piano ကောင်းကောင်း လေးတစ်လုံး လက်ဆောင် ပို့ပေးတဲ့ ဖွားရှင် (ချမ်းမြေ့ဂုဏ်ဝေ သီလရှင်စာသင်တိုက်) ကို ရိုသေစွာကျေးဇူး တင်ပါတယ်ရှင်။ အရမ်းကိုလှပတင့်တယ်ပြီး အသံထွက်လေးလည်း အရမ်းကြိုက် ပါတယ်ရှင့်။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင် ပေးတဲ့ အစ်ကိုကြီး လည်း ကျေးဇူးနော် ” ဆိုပြီးတင်ထားတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခဈြခငျ ရတဲ့ ဖှားရှငျ (ခမျြးမွဂေု့ဏျ ဝေ သီလရှငျ စာသငျတိုကျ) က ဆရာလေး လကျဆောငျပေး တဲ့ စန်ဒယားလေး ကို တမွတျတနိုး တီးခတျပွီး ပြျောမဆုံးဖွဈနတေဲ့ ဖွူဖွူ့ရဲ့ ကနြေပျပီတိ တှကေို ကြျောထကျအောငျ က အမိအရဓာတျဖမျး ပေးခဲ့ပါတယျ။ လကျဆောငျ ဆိုတာ ခဈြသူခငျသူ တှေ အခငျြးခငျြး မတ်ေတာအတိမျအနကျ ကိုဖျောပွတဲ့ သင်ျကတေပါပဲ.
ဒီလကျဆောငျ လေးဟာ ဖွူဖွူ့အတှကျ တော့အရမျး ကိုအသုံးဝငျပွီး မတော နဲ့ပေးတာ မို့ တနျဖိုးမ ဖွတျနိုငျလောကျ စရာပါပဲ။ သီခငျြးကောငျး တှကေိုအမွဲတမျး ဖနျတီးတတျတဲ့ ဖွူဖွူ့ အတှကျတော့ အထောကျအကူ ကောငျး တဈခုဖွဈ ခဲ့ပါတယျ။ မွတျနိုးတဲ့ဂီတ တှကေို နောကျထပျ ဆနျးသဈပွီး ဖနျတီးနိုငျတော့မလို ဖွူဖွူ ကပြျောမဆုံးပါပဲ။
စန်ဒယား လကျသံ စမျးနတေဲ့ပုံလေး တှကေို ” နှဈသဈလကျဆောငျလေး ကွှားပါ ရစနေျော။ ဖွူဖွူသီခငျြးလေး တှတေီးဆိုဖနျတီး ဖို့ဆိုပွီး Piano ကောငျးကောငျး လေးတဈလုံး လကျဆောငျ ပို့ပေးတဲ့ ဖှားရှငျ (ခမျြးမွဂေု့ဏျဝေ သီလရှငျစာသငျတိုကျ) ကို ရိုသစှောကြေးဇူး တငျပါတယျရှငျ။ အရမျးကိုလှပတငျ့တယျပွီး အသံထှကျလေးလညျး အရမျးကွိုကျ ပါတယျရှငျ့။ ဓါတျပုံမှတျတမျးတငျ ပေးတဲ့ အဈကိုကွီး လညျး ကြေးဇူးနျော ” ဆိုပွီးတငျထားတာ ပဲဖွဈပါတယျ။